Saturday May 11, 2013 - 21:41:30 in Sports by Super Admin
Koobka 150aad ee Finalka FA-ga ayaa Maanta waxa aFooda is dari doona Ciyaarat Kama dambeysta Kooxaha man city vs Wigen waxaana Ciyaartaan ay ka dhicid oonaa caawa Fiidkii xiliga afrikada bari garoonka Wambely ee london. labada naadi ayaa ku soo be
Koobka 150aad ee Finalka FA-ga ayaa Maanta waxa aFooda is dari doona Ciyaarat Kama dambeysta Kooxaha man city vs Wigen waxaana Ciyaartaan ay ka dhicid oonaa caawa Fiidkii xiliga afrikada bari garoonka Wambely ee london. labada naadi ayaa ku soo beegmay xili Koobkaan uu jirsaday 150 sano mudadii uu socday waxaana Kii kan ka Horeeyay ee 149 hantiyay Kooxda Chelsea oo sanadkaan ku hartay Sami finalka ka dib markii Man city ay soo moostay.
Koobka 150aad ee Finalka FA-ga ayaa Maanta waxa aFooda is dari doona Ciyaarat Kama dambeysta Kooxaha man city vs Wigen waxaana Ciyaartaan ay ka dhicid oonaa caawa Fiidkii xiliga afrikada bari garoonka Wambely ee london.
labada naadi ayaa ku soo beegmay xili Koobkaan uu jirsaday 150 sano mudadii uu socday waxaana Kii kan ka Horeeyay ee 149 hantiyay Kooxda Chelsea oo sanadkaan ku hartay Sami finalka ka dib markii Man city ay soo moostay.
Ciyaartaan Finalka ayaa loos aadaalinayaa 80% inay hantin doonaan Koobka FA-ga Kooxda Man city ee Macalin Mancine oo iyadu koobkana uu u noqon doono midka kaliya ee xili ciyaareedkaan ay hanato.
Koobka FA-ga oo ah kan ugu qalaisan Dalka ingiriiska ayaa soo bilowday 1863 waxanaa uu soo maray maraaxiilo kala duwan.
hacada Sanadkaan oo koobku jirsaday 150 sano yaa hantin doona kooxaha man city vs Wigen la arki doonee.